FAQ - Business Networking - IEAGE
Kungani kufanele I ukujoyina IEAGE Network?
Njengoba umkhiqizo noma isevisi yakho ezikhishwe, wendawo, esifundeni nasemhlabeni jikelele (in the lwemibhalo ibhizinisi);
Ukuthuthukisa amakhasimende, ababambisene, imibono emisha, sisabalalise ubuxhakaxhaka yakho (izinkundla);
Nokwandisa inhlangano, inzuzo kanye namasu (iqhaza ezifundweni);
Yibani omzimba kusifunda zinhlekelele kwezomnotho (ngoba kungaba ukuthengisa indawo, esifundeni noma emhlabeni jikelele);
Ukujoyina a imvelo kwezenhlalo nezomnotho for osomabhizinisi kanye lakhiwa osomabhizinisi, olinganiselayo ngempela futhi wemfanelo, asekelwe emsebenzini kanye nokukhulumisana.
Uyini umehluko IEAGE Network maqondana nezinye zokuxhumana kanye professional?
The Business Network, do IEAGE, It wadalwa osomabhizinisi abanolwazi kwamasiko amabili, isipiliyoni yobuliminingi kanye professional emazweni ahlukahlukene, owazi nobunzima izindawo ukuthuthukisa osomabhizinisi bendawo futhi global, futhi abe nesibopho emphakathini nezemvelo abazi ngokweqile. Ngaphezu kwezobuchwepheshe base imvelo ulwazi nge Ukugcizelelwa ulwazi evulekile and free.
Koze isikhangiso kuyoba khulula?
The version mahhala isikhangiso mahhala futhi kuyoba khulula njalo.
Kungani mina kufanele ubhalise ngaphambi ungakwazi khulula isikhangiso?
Ngezizathu ezihlukahlukene, kodwa into eyinhloko ukuphepha. Akukho simiso 100% uqinisekile, kodwa thina sibe ezelekene of security ukuthi ukudala indawo ethenjwayo nokunciphisa izingozi, isibonelo, ngokudala amaphrofayli fake. Esinye isizathu to, abasebenzisi bethu, kungaba ukusebenzisa amasevisi amaningi, offers and ulwazi, sinikeza kubahlanganyeli inethiwekhi IEAGE.
Kungani e-mail in the isikhangiso?
Ukuze ugweme usebenzisa spamming e-mail. Kukhona softwares ukuthi basuke eshanela Internet ukuqoqa e-mail amakheli ukuba lisetshenziswe spam neminye imisebenzi obungemthetho, njengoba identity spoofing, theft iphasiwedi, phakathi kwezinye.
Kungani kufanele ufake ulwazi okuningi?
Ukuze silondoloze ezingeni eziphakeme zokulondeka, singakwazi hlola umthombo ulwazi kanye nokuqinisekisa, bonke abahlanganyeli network IEAGE, izinga eliphezulu esingabethemba ethule.
Kungani mina kufanele iqhaza ezithangamini?
Ngaphezu isikhangiso khulula, izinkundla futhi ongadalula umkhiqizo noma insizakalo, bangase bafune abalingani ezintsha, amakhasimende kanye Dala uxhumano ezintsha. Godu, ukhonza ukushintshanisa imibono futhi adale amathuba amasha, ukuthuthukisa ibhizinisi lakho noma ukudala ibhizinisi elisha.
Inqubo for a Ad Free →
Bergamotoner - usizo futhi ukulungisa amaphrinta futhi icebo